AKHRISO:- Faalo ku saabsan labada ciyaaryahan ee Mohamed Salah iyo Neymar – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeSportsAKHRISO:- Faalo ku saabsan labada ciyaaryahan ee Mohamed Salah iyo Neymar
17/09/2018 Sports 0
Hiiraan Xog, Labada ciyaartoy ee waqtigaan casriga ah ugu fiican kubadda cagta Neymar iyo Salah ayaa isaga hor imaan doona toddobaadkaan kulanka weyn ee tartanka Champions League.
Mohamed Salah iyo Neymar ayaa iska hor imaan doona marka kooxda Liverpool tartanka UEFA Champions League ay la ciyaareyso habeenka taalada ah kooxda ka dhisan Paris ee PSG.
> Salah iyo Neymar ayaa kulmay hal kulan ka hor ciyaartaan, inkastoo ciyaaryahana uusan gool ka dhalin kulankaas oo udhaxeyay Roma iyo Barcelona oo kusoo idlaaday barbaro 1-1 ah.
> Salah ayaa ka maqnaa kulankii labaad ee kooxdiisa Roma 6-1 looga badiyay garoonka ku yaala Spain ee Camp Nou.
> Salah ayaa dhaliyay labo gool afartiisii kulan ee ugu horeysay Premier League xilli ciyaareedkan, waxaana sidookale uu dhaliyay guud ahaan afar gool lixdii kulan ee uu u saftay kooxdiisa tan iyo finalkii UEFA Champions League.
> Waqtigaas, Neymar wuxuu ciyaaray 14 kulan, waxaana uu dhaliyey 10 gool, waxaa kujira goolal uu dhaliyay mid kasta oo kamid ah lixdii kulan ee ugu dambeysay ee uu u saftay kooxdiisa.
> afar ka mid ah goolasha Neymar waa horyaalka Ligue 1, halka laba kale oo rigoore ah uu dhaliyay xiligii ciyaaraha caalamiga ah ee Brazil.
> Labada ciyaaryahan ayaa isku da ‘ah waqtigaan , waana 26 jiro, inkastoo Neymar uu ka weyn yahay 131 maalmood Mohamed Salah.
> Neymar ayaa dhaliyay labo gool 8 kulan oo uu ka horyimid kooxaha ingiriiska ka dhisan (labada gool waxay ku qaadatay 626 daqiiqo oo uu wajahay kooxaha Ingiriiska).
> Wuxuu goolkiisii ugu dambeeyay kooxaha Ingiriiska ka dhaliyay kulankii Barcelona 3-1 kaga badiyay Manchester City xili ciyaareedkii 2016. / 17.
> Salah oo kaliya la kulmay kooxo Faransiis ah waqtigiisii Roma, wuxuu xil ciyaareedkii 2016/17 wareega group-yada UEFA Europa League guuldarro 5-4 ah kala kulmay Lyon; Wuxuu dhaliyay hal gool 180 daqiiqo oo uu wajahay kooxaha Farsiiska ka dhisan.
> Kani ma noqon doono safarkii ugu horeeyay Neymar ku tago garoonka Anfield, wuxuu ku dhaliyay goolkii guusha xulkiisa Brazil oo 2-0 kaga bbadiyay Croatia ciyaar saaxiibtinimo oo lagu ciyaray 3 June ee sanadkaan.
DAAWO SAWIRO:- Wafdi ka socda Aqalka Sare oo gaaray magaalada Kismaayo
Dad Banaanbax ka waday magaalada Addis Ababa ayaa la xer xeray